Zimbabwean tyrant Robert Mugabe re-names Harare Int. airport after himself - The Zimbabwe Mail
[ January 20, 2022 ] Gold Miner RioZim Plans to List on Vic Falls Stock Exchange	Capital & Money Markets
[ January 20, 2022 ] Chinamasa attacks Chamisa, Biti over sanctions	Zimbabwe
[ January 20, 2022 ] British man files for maintenance against Zimbabwean spouse	Law & Crime
[ January 20, 2022 ] UK: Terrorism trial of MDC activist starts; ‘urged’ bombing of Mnangagwa motorcade, Zanu PF HQ	Zimbabwe
[ January 20, 2022 ] Violent ZANU PF officials disqualified ahead of by-elections	Zimbabwe
HomeMainZimbabwean tyrant Robert Mugabe re-names Harare Int. airport after himself
Zimbabwean tyrant Robert Mugabe re-names Harare Int. airport after himself
November 9, 2017 Staff Reporter Main, Zimbabwe 0
HARARE (Reuters) – Zimbabwe will upgrade its main airport at a cost of $153 million in an effort to attract more visitors, state media reported on Thursday, as authorities renamed the airport in honour of 93-year-old President Robert Mugabe.
published 32263 articles